किन सारा विश्वको नजर मस्कोको रेड स्क्वायरमा यस्तो छ कारण – www.agnijwala.com
किन सारा विश्वको नजर मस्कोको रेड स्क्वायरमा यस्तो छ कारण
रूसमा विजय दिवस परेड: सोभियत संघ (USSR) को अगाडि नाजी जर्मनी (जर्मनी) को हतियार राख्ने मिति र दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्य9मे हो तर पहिलो विजय दिवस परेड 24 जुन 1945 मा हुन्छ। किनभने लडाइँमा फसेको सोभियत संघसँग उत्सव मनाउने समय थिएन। यो दिन सम्पूर्ण सोभियत संघ र पूर्वी युरोपमा सबैभन्दा ठूलो चाडको रूपमा मनाइन्छ। बिदाको दिन र वसन्त ऋतुको शुरुवात भएकाले धेरैजसो मानिसहरु पिकनिक मनाउने गर्छन् तर यो दिन सोभियत संघ र रुसको सैन्य शक्ति विघटनपछिको ७६ वर्ष पुरानो विश्वसामु रहेको छ । यस दिन रुसी राष्ट्रपतिले देशलाई सम्बोधन गर्ने गर्दछ, जसलाई सारा विश्वले ध्यान दिएर सुन्छ। यसपटक यो सम्बोधन र यो परेड बढी महत्वपूर्ण छ ।
विजय दिवस परेड मे9मा हुनेछ
सारा विश्वको नजर मस्कोको रेड स्क्वायरमा मे ९ मा हुनेछ । मस्कोमा यो परेडको लागि ठूलो तयारी भइरहेको छ, तर रूस मात्र यो परेडको लागि पर्खिरहेको छैन। रुस र युक्रेनबीच फेब्रुअरी २४ देखि सुरु भएको युद्धले सारा विश्वलाई दशकौं यताकै गहिरो तनावमा परेको छ। सारा विश्व यस युद्धको चर्किने र अर्थतन्त्रको विनाशको डरले घेरिएको छ । रुस र त्यसका सहयोगी राष्ट्रहरू र अमेरिकालगायत युरोपका अधिकांश देश आमनेसामने छन् । सबैको दिमागमा एउटै प्रश्न छ, पुटिनले मे ९ मा रेड स्क्वायरबाट के भन्नुहुनेछ?
त्यहाँ NATO देशहरूको बारेमा घोषणा हुन सक्छ
विजय दिवसको परेडमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भाषण हो, जसमा रूससँग सम्पूर्ण विश्वको सम्बन्ध, ठूला योजनाहरू, रसिया भित्रका राजनीतिक कार्यक्रमहरूको बारेमा घोषणाहरू गरिन्छ, त्यसैले यस पटकको विजय दिवस परेडमा पुटिनले महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्न सक्छन्। युक्रेन र नाटो देशहरु संग युद्ध को बारे मा। रुसले युक्रेनको पूर्वी भागमा लुहान्स्क पिपुल्स रिपब्लिक र डोनेट्स्क पिपुल्स रिपब्लिक गरी दुईवटा स्वतन्त्र देश बनाएको छ, त्यसैले पुटिनले चाहेको कुरा हासिल भएको छ र पुटिनले मे ९ हुहमा युक्रेन विरुद्ध रूसी सैन्य कारबाही रोक्ने घोषणा गर्न सक्छन्। कतिपय विज्ञहरू यस्तो हुनसक्ने विश्वास गर्छन्।
विजय दिवस नाजीवाद को पराजय को दिन
गत वर्ष, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विजय दिवस परेड भाषणमा नाजीवादका नयाँ समर्थकहरू देशहरूलाई चेतावनी दिए। नाजीवादलाई युरोपमा सबैभन्दा ठूलो दुष्ट मानिन्छ, जसको प्रतीक दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरले गरेको भयानक रक्तपात र नरसंहार थियो। पुटिनले सैन्य क्र्याकडाउनको सुरुमा युक्रेनमा नाजी सेनाको शक्तिको आरोप लगाए। विजय दिवस नाजीवादको पराजयको दिन हो र रूसलाई नाजी शक्तिहरूमाथि विजयी भएको सम्झना पनि हो। प्रश्न यो छ, पुटिनले यस वर्ष के भन्न गइरहेका छन्?
विजय दिवस परेडमा रूसले आफ्नो सबैभन्दा आधुनिक हतियार प्रदर्शन गर्दछ। परेडमा सधैं नयाँ हतियार प्रस्तुत गरिन्छ। वेस्टर्न ब्लकले विजय दिवसमा पुटिनले आफ्नो सैन्य कारबाहीलाई तीव्रता दिने वा पूर्ण युद्धको घोषणा गर्न सक्छ भनी प्रचार गरिरहेको छ। यो डर विशेष गरी पश्चिमी मिडियाले व्यापक रूपमा प्रचार गरेको छ, यद्यपि रूसले आधिकारिक रूपमा यसलाई समान रूपमा कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ। रुसले युक्रेन विरुद्धको युद्धमा नपरेपनि आफ्ना केही माग पूरा गर्न युक्रेन विरुद्ध विशेष सैन्य अभियान सुरु गरेको छ, जुन निकै सानो स्तरमा लडिरहेको छ ।
विजय दिवस परेडमा रूसी सैन्य शक्तिको सबैभन्दा शानदार प्रदर्शन हो। मस्को बाहेक रुसका हरेक साना सहरमा पनि यो पर्व मनाइन्छ । यस दिन, सैनिक र हतियारहरूको परेड बाहेक, अमर रेजिमेन्टको परेड पनि हुन्छ जसमा रूसीहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने आफ्ना आफन्तहरूको तस्बिरसहित मार्च गर्छन्। यस युद्धमा 25 मिलियन भन्दा बढी रूसीहरू मारिए। वास्तवमा, जर्मनीले7मे 1945 मा आत्मसमर्पण कागजातमा हस्ताक्षर गरेको थियो, जसमा यो लेखिएको थियो कि जर्मन सेनाहरूले 8 मे राती 11.01 बजे आफ्नो हतियार छोड्नेछन्। तर समय क्षेत्रको भिन्नताका कारण यो दिन मस्कोमा मे ९ भयो र रुसले मे ९ मा विजय दिवस मनाउन थाले । युक्रेनले पनि मे ९ मा विजय दिवस मनाउने गर्दथ्यो तर सन् २०१५ मा युक्रेनले पनि युरोपका बाँकी देशहरू जस्तै मे ८ मा विजय दिवस मनाउन थाल्यो । युक्रेनले रुसलाई अब रुसबाट अलग भएर युरोपलाई भेट्ने बाटो देखाएको छ ।
तर, सोभियत संघ र युक्रेनले दोस्रो विश्वयुद्ध सँगै लडे, जसको विजयलाई विजय दिवसको रूपमा मनाइन्छ। तर युक्रेनसँग रुसको तनाव विगत केही वर्षदेखि चलिरहेको छ । रुसले युक्रेनी सेना र धेरै नाजी विचारधारा भएका संगठनहरूले पूर्वी युक्रेनमा रुसी मूलका युक्रेनीहरूको नरसंहार गरेको आरोप लगाएको छ। यद्यपि युक्रेन र रुसको संस्कृति र इतिहास समान छ, युक्रेनले दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीको समान क्रूरता र बलिदानको सामना गरेको थियो। दुवै देशले किभियन रुसीहरूलाई आफ्ना पुर्खा
मान्छन्। रुस र युक्रेनले सन् १९२२ मा पहिलो पटक सोभियत संघको स्थापना गरेका थिए तर सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा धेरै उतारचढाव आए ।
यस पटक, पुटिनले नाजी शक्तिहरूमाथि रूसी जनताको अर्को विजयको रूपमा विजय दिवसको परेड प्रस्तुत गर्नेछन् वा रूसमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्ने योजनाको बारेमा बताउछन् वा रूसविरुद्ध नाजीवाद र पुँजीवादको षड्यन्त्रको बारेमा कुरा गर्नेछन्? उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै ठूलो तयारीको बारेमा बताउनुहोस्। वास्तवमा, मे9को बिहान सम्म, यो जान्नको लागि सारा संसार मस्कोको रेड स्क्वायर तिर हेर्नेछ।